Isakhiwo sangaphandle sokwakheka kwe-evaporator, anti-corrosion, ukonga amandla kunye nemveliso;
Inxalenye yokudibana nomkhenkce yintsimbi engenasici, ikhuselekile kwaye icocekile
Umatshini womkhenkce weqhwa leqhwa onke amacandelo aqhagamshelana nomkhenkce ayenziwe ngentsimbi engatyiwa ngentsimbi ephezulu ukuze kuhlangatyezwane nemilinganiselo yezokhuseleko nococeko.
Ityhubhu yethu yomatshini weqhwa, ekwabizwa ngokuba ngumenzi weqhwa, yenziwe ngendlela yoxinzelelo lwenqanawa kunye ne-CE (PED) ASME eqinisekisiweyo. Onke amacandelo achukumisayo omkhenkce ayenziwe ngentsimbi engenasici, eqinisekisa uzinzo nococeko.
I-Brine Containerized Block Umatshini weqhwa
Isithinteli esinebhokisi yomkhenkce esinebhokisi yomatshini ekulula ukuhambisa, indawo leyo ayifuni ulwakhiwo olungaphezulu, oludityaniswe namanzi kunye nombane unokusetyenziswa ngokukhawuleza.
Siyi-block ice machine maker kunye nomthengisi eTshayina.Ibhokisi yomatshini webhloko wekhontrakthi, uyilo oluhambelana kakhulu, zonke izixhobo ezifakwe kwisikhongozeli se-ISO esisezantsi, nakwindibano yomzi-mveliso kunye novavanyo olugqityiweyo.
Ngqo- ukupholisa ibhloko kumatshini weqhwa
Umatshini wethu webhloko weqhwa ulunge ngokukodwa ukuba usetyenziswe kumazwe aphantsi-kubanzi ukupholisa kwimizi-mveliso, ukuloba elwandle, ukugcina ukutya, ukukrola umkhenkce nokunye.
I-Snowkey ibonelela ngesisombululo esigqibeleleyo kwimveliso yeqhwa ebhloka nokuba kungokupholisa ibrine okanye ngokupholisa ngokuthe ngqo.